By Person: Halima Osman • May 18, 2021
Degmooyinka iskuulka Iowa ayaa dib u eegis ku sameynaya siyaasadooda ku saabsan xirashada maaskaro kadib markii gobolka uu soo saaray hagitaan cusub dabayaaqadii usbuucii hore.
Si kastaba ha noqotee, dhowr degmo dugsiyeed oo waaweyn, oo ay ku jiraan Sioux City ayaa wali u baahan iyaga.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ayaa leh waji-duubku waa inay ikhtiyaari yihiin iyo in carruurta loo soo bandhigo COVID-19 aysan ahayn inay guriga joogaan.
Taasi waxay khilaafsan tahay CDC-da oo leh waji-daboolista iyo karantiilku waa inay sii socotaa illaa dad waaweyn iyo carruur badan laga tallaalayo.
Laga bilaabo maanta Hy-Vee uma baahna macmiil si buuxda loo tallaalay iyo shaqaaluhu inay xirtaan wejiga dukaanada, haddii aysan u baahnayn sharciyada maxalliga ah. War-saxaafadeed ayaa sheegaya in daboolida wajiga ay sii waddo in si adag lagula taliyo macaamiisha aan si buuxda u tallaalin. Walmart iyo Target sidoo kale waxay ku dhawaaqeen cusbooneysiin isku mid ah.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa soo warisay inaysan jirin dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 Talaadadii. Waxaa jira ku dhowaad 200 kiis oo cusub oo mid lagu daray Gobolka Woodbury.
Tan iyo markii uu bilaabmay faafida, 6006 dadka degan Iowa ayaa u dhintey dhibaatooyinka cudurka, iyadoo ku dhowaad 40% ay degan yihiin xarumaha daryeelka muddada-dheer.
Caawinaad ayaa ku socota wadada qoysaska ku nool agagaarka Magaalada Sioux City ee wajahaya gaajada. Bixinta Sanduuqa Cuntada ee Beeraleyda Qoysaska waxaa loo qorsheeyay Khamiista iyo Khamiista soo socota 10-ka subaxnimo goobta baabuurta la dhigto ee Kaniisadda Bulshada ee Sunnybrook. Munaasabada wadista gawaarida waxaa martigelinaya Xarunta Rajada iyo Xarunta Waxqabadka Bulshada ee Siouxland. Agaasimaha Fulinta ee Hay'adda Waxqabadka Bulshada ayaa sheegay in cunno yaraanta ay weli ku badan tahay Siouxland iyada oo loo marayo fiditaanka cudurka.